तिनी भाइ भियाग्रा लिएर कहाँँ गए होलान् ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/तिनी भाइ भियाग्रा लिएर कहाँँ गए होलान् ?
पिलन्धरे युवक मेडिकलमा आए । भियाग्रा मागे । झर्ला झर्ला जस्तो लगाएको पाइन्टको गोजीमा हाले । उनले पहिरिएको जिन्स पाइन्टमा मयलले अर्को रंग भरेको थियो । च्याप्सो अनुहार, कमजोर ज्यान, अस्तव्यस्त पहिरन, सरसफाइमा कमी उनैले भियाग्रा किनेर लगे ।अध्ययनका रिपोर्टहरु अनुसार ‘भियाग्रा लिङ्गको उत्तेजनामा कठिनाइ हुने व्यक्तिको उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ । पुरुषमा पाइने समस्यामा यो वरदान नै सावित भएको छ । यौन उत्तेजनामा समस्या हुने कतिपय महिलामा यसले फाइदा पुगेको पाइयो ।’  यद्यपि यसका मृत्युसम्म हुनसक्ने अनेक घाटाहरु पनि छन् । हरेक औषधिले ल्याउने साइड इफेक्टबाट यो पनि मुक्त छैन । मानिसहरु तत्कालै चाहना पूरा गर्न लागिपरेका छन् ।
यौनइच्छा पूरा गर्न त्यसकै सहारा लिने गरेका छन् ।ती युवक देखिउञ्जेल मेरा आँखाले पछ्याए । दिमागले टिठ मान्यो । अनि अनेक तर्क वितर्क गर्न थाल्यो । तिनकी प्रेमिका या यौनकर्मी कस्ती होलिन्, जसले मयलको भारी बोकेको युवक स्वीकार्छिन् । उसलाई माया गर्छिन् । चुम्बा खान्छिन्, अँगाल्छिन् यो सब गर्न उनलाई घिन लाग्दैन । तिम्रो जीवन सुधार गर, नुहाई धोइ मयल पखालेर हुलुका बन भन्दिनन् । आखिर समाज सुधार गर्ने दायित्व सबैको हो । त्यसका लागि पहिला आफै सप्रिनुपर्छ ।
फेरि तिनै युवकतिर दिमाग मोडियो । २५/३० को हाराहारीका लाग्थे । तिनले सीप कहिले सिक्ने हुन् । जहान परिवार कतिबेला बनाउँछन् । पालन पोषणको कमाइकजाइ हुने हो होइन । पढाइलेखाइ कसरी चल्ने हो । यी सबै सोध्न मन थियो । तिनलाई जिन्दगीको परिभाषा सोध्न पाए के उत्तर दिन्थे होला ? भन्ने लाग्यो । ती अपरिचित व्यक्ति आँखादेखिनै ओझेल परिसकेका थिए । पक्कै पनि आफूले बिताएको दिनचर्या हरेकलाई आनन्दको लाग्छ । सबैले आफूलाइ बुद्धिमान र विवेकी ठान्छ । चाहे चोरी डकैती वा हत्या हिंसा गरेको व्यक्ति किन नहोस् । आफैलाई सही देख्छन् । गल्ती कमजोरी अरुले देख्ने हो । नापजोख उसको व्यवहारबाट समाजले गर्ने हो । उनलाई त्यही जीवन ठीक थियो, मलाई भने उनको व्यवहार कत्ति पनि चित्त बुझेन ।
त्यसको केही दिनपछि अर्को मेडिकलमा उस्तै अवस्था फरक प्रसंग भेटेें । त्यहाँ खाइलाग्दा युवा हतार–हतार आए । राम्रै कमाइकाज हुने खातापिता परिवारकै हुनुपर्छ । त्यसो नभए पनि कमाइ मोटै छ होला । तिनको पहिरन, चालढाल र लवाई माथिल्लो स्तरकै लाग्थ्यो । तर उनी निकै आत्तिएका थिए । त्यो हडबडाहट व्यवहारले देखाउँथ्यो । आउने बित्तिकै पिसाव चेक गर्ने छ भनेर सोधे । मेडिकल सञ्चालकले छ भनेर उत्तर दिए । युवकले पैसा तिरे र त्यो जाँच गर्ने हातमा समाते ।
जाँच गर्ने तरीका के हो ? भनेर गर्भ रहेको देखाउने एउटा वा दुईवटा धर्काका बारेमा सोधे । त्यसको जवाफ पाउने बित्तिकै उनी कुदिहाले । यति हतार कि पख्नुस् पख्नुस् तीनपटक भनेपछि हच्किए । यो फिर्ता लैजानुस भनेपछि अरे भन्दै पैसा गोजीमा हालेर हि“डे । पैसा फिर्ता लानै बिर्सने हतार थियो । पैसा पाएपछि झन उनी रोकिने कुरै थिएन ।
उनको हतारोले होस् ठेगानमा छैनन् भन्ने देखाउँथ्यो । त्यति धेरै आत्तिएका थिए, सम्भवतः उनलाई हिडेको बाटोको पनि याद हुँदैनथ्यो । यति धेरै काँतर भएका थिए उनको खँदिलो जिउडाल लुत्रुक्क गलेकोे थियो । मनले हारेपछि ज्यानको मतलब हुँदैन पनि । सायदः त्यति धेरै काँतर दुश्मनसँग लड्दा देखिन्नन् । अरु काम गर्दा हारेपनि सिकुला भन्छन् । तर तत्काल आइलागेको घटना, हारे बर्बाद हुन्छ, जिते सुखको सास फेर्न पाउँछुबाहेक अरु थिएन । त्यही निर्विकल्प जीतको सपनाले उनलाई पागल बनायो । बेहोसीमा हिडिरहेको हुनुपर्छ ।
यी त प्रतिनिधि पात्र हुन् । यौनका मामिलामा यत्रो भयावह अवस्था आउनु समाजका लागि घातक छ । ऊर्जाशील युवा पिढी यसैमा पतन हुनु राज्यका लागि ठूलै नोक्सान हो । आफैलाई नोक्सान गर्न पछि पर्दैनन् । युवा पिढीका लागि झन बर्बादीको बाटो बनेको छ । यसैले अब यौनलाई अपराधको रुपमा ग्रहण गर्नुहुन्न । गास, बास, कपास र यौन प्राकृतिक आवश्यकता हुन् । कदाचित समस्या आए समाधान छ । त्यसरी मानसिकरुपमा विक्षिप्त र शारीरिकरुपमा अति कमजोर युवालाई बन्न दिनुहुन्न । यसका लागि सबैले आफ्नो भूमिका खोजौं ।
दुई वर्ष जति भयो एकजना नानी कक्षा १० पास गरेपछि अघि बढ्न चाहिनन् । बरु साँझ–साँझ बजार पस्ने लतमा लागिन् । मेकपले चिटिकक भएर उनी बजार निस्किन्थिन् उतै बस्थिन् वा फर्किन्थिन् । त्यसको बारेमा परिवारले समेत त्यति मतलब राखेको देखिदैन । न त साँझ–साँझ बजार निस्कनुको कारण नै खोज्यो । उनी मनमर्जी निस्किन र आफ्नो गन्तव्यतिर लागिन् । त्यसपछि केही दिन हराउने क्रम शुरु भयो । अहिले महिनौ हराउने गरेकी छन् ।केही समयपछि तिनको विवाह गरेको खबर सार्वजनिक भयो । तिनको बिहेमा माइतीपक्षबाट खास्सै विधि खोजिएन । त्यसको केही समयपछि न माइतीको सम्पर्कमा न त घरको अधिनमा रहन सकिन् । बरु पटक–पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रात बिताउने गरेको थाहा भयो ।
अहिले पनि बाबु आमाले खोजिरहेका छन् । कतै भेट्दैनन् । उनीसित सामाजिक सञ्जालमा सम्पर्क हुनेहरुले घोराही, लमही, तुलसीपुर र भालुबाङतिरका होटलहरुमा भएको अनुमान लगाउँछन् । चिनजान गरेका छरछिमेकले प्रत्यक्ष भेट्दैनन् । तिनको संगत र गास, बास र कपासको जोहोका बारेमा कसैलाई थाहा छैन । यद्यपि प्रहरीले पनि खोज्छ । यही समाज हो तिनलाई वर्षौंसम्म लुकाइरहन्छ । यतैका पुरुष हुन तिनलाई पाल्छन् ।
तिनका आवश्यकता पूर्ति गरिदिन्छन् । केही दिनअघि एउटा भिडियो सार्वजनिक भयो । घरमा गमला फोडेर, पकाउने तुल्याउने भाँडा वर्तन आँगनमा फ्याँकेर उधुम गरेको देखिन्थ्यो । भव्य महलको हविगत निकै दर्दनाक थियो । त्यस भिडियोमा पाको व्यक्ति बिलौना पोख्दै थिए– ‘यस्तो सन्तान हुनुभन्दा कसैको नहोस् । पैसा माग्छ, भए जति दिए पनि सकिहाल्छ । हजार दुई हजार लाख जति पनि सक्छ । छैन भनेपछि बहुलाएर घरमै आगो लगाइदिन्छु भन्छ ।
वाइक लात्तीले पल्टाएर भाँच्दियो, आमा डिउटी गा’छे, बिहानभरि काम गरेको छु, सुगर र विपीको औसाधि खा’छु । के गरुँ हे भगवान, यति तनाव यति तनाव यो मरेर गए हुन्थ्यो । यसको कोठा चुरोट गन्हाएको छ बोतलमा मुत्या’छ । यस्तो सन्तान के गर्नु ? कम्ति गराएन । पापी दुश्मन छ मेरो घरमा । अहिले मसित पैसा छैन । छैन भन्नेबित्तिकै अंग प्रत्यंगको कुरा गरेर गाली गर्छ । अस्ति गेट तोड्यो, यस्तो पापी अपराधी मरेर गए हुन्थ्यो । म त दिक्क भएँ हे भगवान ? कहिलेसम्म यो तानाशाही सहने होला । यस्तो सन्तान हुनुभन्दा कसैको नहोस् ।’ जन्माउने बाबुको यो भनाइ र घरको दृश्यले साँच्चै मन दुःख्छ । युवा पिढीमा यस्तो कुसंस्कार कसरी भित्रियो ?
होटलबाट समातिएका यौन जोडीहरुलाई प्रहरीले प्रशासन लैजान्छ । त्यहाँ उनीहरु अनुहार देखाउन लजाउँछन् । राजनीतिक बन्दीले क्यामरातिर ध्यान दिन्छ र गतिलो फोटो निकाल्न चाहान्छ । चोरी, बलात्कार, लागूऔषध, देहव्यापारको आरोप लागेका अभियुक्त क्यामराबाट लुक्न खोज्छन् । क्यामराबाट जति छिपाउन खोजे पनि आफन्तमा उसको कर्म गन्हाइसकेको हुन्छ । लुक्दै छिप्दै गरेको काम पर्दाफास हुन्छ नै ।
प्रतिष्ठतलाई घिनलाग्दो वातावरणमा मिल्काउँछ । जहाँ मानिसहरु अनेकथरी टिप्पणी गर्छन् । यो खति गर्ने अवस्था लामो समय रहन दिनुहुन्न ।यसरी कोही भौतिकरुपमा हराएका छन् त कतिपय मानसिकरुपमा रन्थनिएका छन् । वैदेशिक रोजगारका कारण घर भाँडिनेहरुको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । यसको अन्तर्य महिला योनी प्राप्त गर्ने र आफ्नो एकलौटी बनाइराख्ने पुरुषवादी चिन्तन छ ।
आफ्नो पोथी संरक्षण गर्ने भालेवादी सोच छ । यी सबै क्रियाकलापले महिलालाई आफ्नौ अंगप्रति अधिकार छैन । यो घरमा खाना खाना लाग्या छन् भित्र नजाऊ भन्ने सभ्यता नेपाली समाजमा प्रसंनीय छ । उनीहरुले शारीरिक सम्पर्क गर्न लाग्या छन् भन्यो भने बैध र अवैधको प्रश्न उठाइन्छ । श्रीमान श्रीमतीको नाता खुलेन भने ताला लगाइदिने र प्रहरी बोलाएर हंगामा मच्चाइन्छ । यो प्राकृतिक आवश्यकता हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । खाली श्रीमान श्रीमतिको सम्बन्धका रुपमा लिइन्छ । आठ दश वर्ष श्रीमान् हरायो भने पनि उसकै पर्खाइमा यौन तृष्णाले जल्दै बस्नुपर्छ । उसको चाहनालाई त्यही नाताको बन्धनले शिर ठाडो गर्नै दिदैन ।
आँखाले देखेको बाहेक अरु प्रमाणको रुपमा लिनु हुँदैन । कसैको पिछा लाग्नेकाम बन्द गर्नुपर्छ । कोसँग कहाँ के कामले हिडेको छ किन चियोचर्चो गर्नु ? कसको घरमा कतिजना सुतेका छन् भनेर हेर्न जाने होइन । होटलका कोठाहरु चाहार्दै हिड्नु पनि परेन । सम्बन्धित व्यक्तिले अन्यायमा परें नभन्दै त्यो टिप्पणीको विषय बन्दैन । छर छिमेकी तथा अरु व्यक्तिलाई असर गरेन भने मुद्दा बन्दैन । तर मानिसहरु बिनाकारण अरुका लागि टाउको दुखाउँदैछन् । अरुको जीवन र भविष्य बर्बाद पार्न मरिहत्ते गरी लागेका छन् । त्यस्ता सबै त्याग गरौं । सुन्दर समाज निर्माण गर्न अर्काको लक्ष्यको बाधक नबनौं । अनि मात्रै हराएकाहरु भेटिनेछन् । वैदेशिक रोजगार वा अन्य कामले बाहिर बस्नेहरुका घर भाँडिने छैनन् ।
जति नियम कडा हुन्छ त्यति पुरुषार्थ देखाउन इच्छा जाग्छ । जति लुकालो हुन्छ उति बढी बुद्धि लगाउने स्वभाव हुन्छ । मानिसहरु नियम कानुन कडा नभएकाले छाडा भयो भन्छन् । मानवीय व्यवहार ठीक उल्टो हुन्छ । जति– जति लाजको विषय बनाइन्छ त्यति इच्छा र उत्सुकता जाग्छ । किन यसरी लुकाउँछन्, के के हुन्छ होला, कस्तो हुन्छ होला भन्छ । बरु मर्न तयार हुन्छ काम गर्छ नै । त्यसैले सबै कुरा बुझाउने र चित्त बुझ्दो जवाफ दिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यौन न बहादुरीका लागि न त कसैको इज्जत हाल्न बनेको हो । यो त प्राकृतिक आवश्यकता हो । जसको स्वस्थ यौनांग छ उसलाई चाहिन्छ । जात, धर्म, धन दौलतले रोक्दैन । त्यसैले प्राकृतिक आवश्यकताको रुपमा बुझी सहज बनाउँ । समाजका क्षतिहरु जोगाऔं । यो लेख पत्रकार गोविन्द खड्काले दाङबाट प्रकाशित हुने नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकका लागि लेख्नुभएको हो।
एकैपटक जन्मेका तिम्ल्याहा दिदीबहिनी एकैपटक गर्भवती, पहिल्यै योजना बनाएर भएको होइन
भगवान गणेशको पुजा यसरी गर्नुस्, चिताएको कुरा अवश्य पुग्नेछ
श्रीमतीहरु कति प्रकारका हुन्छन् ? के तपाईलाई थाहा छ ? तपाई कस्ति श्रीमती वा तपाईकी श्रीमती कस्ती ?